किन जानु र अमेरिका ? दर्जन बढीलाई रोजगारी, मासिक ३ लाख आम्दानी - Aarthiknews
विहीबार, १५ असोज २०७७ Thursday, 01 October, 2020
किन जानु र अमेरिका ? दर्जन बढीलाई रोजगारी, मासिक ३ लाख आम्दानी
विहीबार, ३० जेठ २०७६
भद्रपुर । परिश्रम गरेर पैसा कमाउन विदेश जानुपर्दैन भन्ने उदाहरण पेश गर्न सफल भएका छन् झापा मेचीनगर–४ का युवा जमात । दुई दर्जनभन्दा बढी युवाको त्यो समूह गाईपालनबाट परिवारसँगै बसेर मासिक दुईदेखि अढाई लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ ।
मेचीनगर–४ मा मात्र साना–ठूला गरी २६ गाई फार्म छन् । विसं २०६७ सालमा स्थानीय युवा निरोज बोगटीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएपछि गाईपालन व्यवसाय शुरु गर्नुभएको थियो । “शुरुमा बोगटीले काम नपाएर गाई पाल्न थालेछ भन्नेहरुले पछि यही व्यवसाय शुरु गरेका हुन,” उनी भन्छन् – “दुई–चार लाख कमाउन विदेश जानुपर्दैन मिहिनेत गर्न सक्दा लण्डन, अमेरिका घरमै छ ।”
हाल उहाँले नियोग अभियान कृषि तथा पशुपालन नामक संस्था नै दर्ता गरेर दुई फार्म सञ्चालन गरिरहनुभएको छ जहाँ १५० भन्दा बढी होलेस्टन जातका गाई छन् ।
दैनिक ९०० लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका छन । उनकामा १० युवकले रोजगारी समेत पाएका छन् । सोही वडाका ४१ वर्षीय केशव सुवेदीको फार्म अवलोकन गर्न आउनेको यतिबेला दैनिक भीड लाग्ने गरेको छ । उनले १२० होलेस्टन जातका गाई पालेका छन । व्यावसायिक रुपमा बोगटीबाट प्रेरित भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको सुवेदीले दैनिक ८००÷९०० लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका छन । सात वर्ष अघि रु सात लाखबाट शुरु गरिएको गाईफार्ममा हाल रु २ करोड भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
“अन्य व्यवसायको तुलनामा गाईपालन उत्तम लाग्छ,” उनले भने– “प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र दैनिक हुने आम्दानीले पनि जो कोही आर्कषित हुने गरेका छन् ।” उनलाई पनि सरकारले आधुनिक तरीकाले फार्म सञ्चालन गर्न साइलेस (घाँसलाई कुहाएर दाना बनाउने तरीका) मा ७५ प्रतिशत अनुदान दिएको छ । पाँच विघा आफ्नो र १७ विघा थप जग्गा भाडामा लिएर उनले घाँसको लागि मकैखेती गरेका छन् ।
बजारबाट किनेको दाना भन्दा कयौं गुणा बढी पौष्टिक तत्व हुने भएको हुँदा उनले घाँसको लागि मकै खेती गरेको बताए । वार्षिक प्रतिबिघा रु ४० हजारका दरले लिजमा लिएको जग्गाबाट वर्षमा तीन पटक मकै उत्पादन गरेर साइलेस बनाउँदै उहाँले गाईलाई खुवाउँदै आएका छन ।
उन रातभर गाईलाई आधुनिक गोठमा बाँधेर राख्ने र दैनिक दिउँसो ८ घण्टा बिरुवा घारीमा लगेर खुल्लै छाड्ने गरेका छन । “सिमेन्टको भूइँ भन्दा माटोमा बस्न रुचाउँदो रहेछ गाईले,” सुवेदी भन्छन – “विभिन्न तालीममा लिएको ज्ञान र गाईफार्म सञ्चालन गरको अनुभव अनुसार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म खुल्ला छाड्ने गरेको छु ।” गोठदेखि १५० मिटरको दूरीमा उनले गाईलाई बस्नका लागि तीन कठ्ठा जग्गामा खमारीको बिरुवा रोपर शीतल छहारी समेत बनाइदिएका छन ।
दैनिक १३ युवकलाई रोजगारी दिँदै आएका सुवेदीले खर्च कटाएर मासिक अढाईदेखि तीनलाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको बताए । उनको गाईफार्ममा ‘रातो टीका निधार’ मा भन्ने फिल्मको समेत छायाङ्कन भएको छ ।”
उनले गाईफार्म आम्दानीको राम्रो स्रोत भए पनि दक्ष प्रविधिज्ञको भने अभाव रहेको बताए । गत वर्ष मात्र खोरेत लागेर उहाँका ३० दुहुना गाई मरेका थिए ।
जिल्लामै पहिलो व्यावसायिक गाईफाम सञ्चालन गर्ने बाहुनडाँगी –४ कै युवा रहेको दाबी गर्नरे स्थानीयवासी राजेश बास्कोटाले । “गाईफामबाट घाटा छैन नाफा नै छ,” उनले भने – “नशा नशामा गाई कुदेको छ । मनबाटै व्यवसाय गर्दा आम्दानीसँगै सन्तुष्टि पनि मिलेको छ ।”
चार वर्ष कतार बसेर फर्कनुभएका बास्कोटाको फार्ममा १५० गाई छन् । यही वर्षभित्रमा ५०० देखि एक हजार पु¥याउने लक्ष्य छ । त्यसो त उनलाई अमेरिकामा रहेका साथीले गाई पालेर नबस्न भन्दै प्रवेशाज्ञासमेत पठाइदिएका थिए । अमेरिकाबाट आएको प्रवेशाज्ञा नै त्यागेर व्यवसायमा लागेको बताउँदै उनी भन्छन – “रातभरि सुतेर बिहान उठ्दा घरमै पैसा आइरहेको हुन्छ । किन जानु र अमेरिका ?
गाईपालनमा युवाको भविष्य उज्ज्वल देख्नु भएको बास्कोटाले कामदार र डाक्टरको भने समस्या झेलिरहेका छन । रु ५ करोड भन्दा बढी लगानी रहेको गाईफामबाट उनले मासिक रु तीन लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नुको साथै एक दर्जन युवालाई रोजगारी समेत प्रदान गरिरहेका छन ।
उनका अनुसार बाहुनडाँगीलाई सरकारले जसरी मकै, धान, सुपारी र रबरलाई जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र नै छुट्याएर किसानलाई प्रोत्साहन र सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ त्यसरी नै बाहुनडाँगी गाईफामको ‘हब’ भएको हुँदा ब्लक नै बनाएर लगानी गर्न आवश्यक छ ।
उनहरुले उत्पादन गर्दै आएको दूध मेचीनगरमै रहेको ऋतिका डेरीले घरमै गएर खरिद गर्ने गरेको छ । दुग्ध विकास सङ्घ मेचीनगरका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सुवेदीले सरकारले धुलो दूधको कारखाना प्रदेश नं १ कै इटहरीमा बनाउन लागेको हुँदा अब ‘मिल्क होलिडे’ नहुने समेत अपेक्षा गरे । अहिले बाहुनडाँगीका गाईपालक किसानहरु सङ्गठित भएर अघि बढेका छन् ।
उनका अनुसार जति पनि बाहुनडाँगीका गाईपालक किसान छन् उनीहरुले आफ्नै खर्चमा भारतको पञ्जाब गएर गाईपाल्ने शीप सिकेर आएका छन् । यस्तो तालीमको व्यवस्था सरकारले गरे यस व्यवसायमा अझै युवाको आकर्षण बढ्ने अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ । पशुुको बीमादेखि कृत्रिम गर्भाधानजस्ता सामान्य विषयमा नगरबाट सहज सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने उनका माग छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले पशुपालक किसानलाई नै लक्ष्य गरेर बाहुनडाँगी–४ मै पशु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न लागेको बताए । त्यसको लागि जग्गाको खोजी भइरहेको छ र आगामी वर्षभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाको छ । उपप्रमुख उप्रेतीका अनुसार केन्द्रमा पशु डाक्टर, प्रविधिज्ञ र प्रशिक्षकको व्यवस्था गरिने छ ।
मेचीनगर नगरका पशुपालक किसानलाई गोठ र गाईको सङ्ख्या हेरेर रु एक लाखदेखि रु दुई लाखसम्म अनुदान दिने गरेको बताउँदै उप्रमुख उप्रेतीले भने – “अनुदान मात्रले भएन प्रविधिज्ञ र डाक्टरको व्यवस्था गरेर उहाँहरुलाई पशुपालनमा प्रेरित गर्ने योजना छ ।”
उनले जिल्लामा सबैभन्दा बढी पशुपालनमा मेचीनगर नै अगाडि रहेको बताए । मेचीनगरका १, ३, ९ र ४ मा मात्र ६० भन्दा बढी गाईफार्म रहेका छन् । बाहुनडाँगीकै अर्का युवा सन्तोष सुवेदीले समेत साथीहरुबाट प्रभावित भएर व्यावसायिक गाईपालन शुरु गरेको बताए । उनको फार्ममा यतिबेला २५ वटा गाई छन् । एक महिनाभित्र थप ५० वटा गाई भारतको विहारबाट मगाएको उनले बताए ।
रोजगारीको नाममा लाखौं युुवा विदेशी भूूमिमा गइरहेको अवस्थामा बाहुनडाँगीका युुवा भने आन्तरिक स्वरोजगार बनेर कृषिमा योगदान दिइरहेको बाहुनडाँगी नागरिक समाजका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले बताए । अपार सम्भावनालाई महशुुस गरी पछिल्लो चरणमा शिक्षित युुवा जमात नै पशुुपालन पेशामा आकर्षित भएको उहाँको ठम्याइ छ ।
‘केही गरौं, गाउँमै अवसर खोजौं, विदेश त्यागौं’ भन्ने प्रवृत्ति बाहुनडाँगीका युवामाझ बढ्न थालेको छ । बाहुनडाँगी कृषिका लागि उर्बरभूमि भएकाले पशुपालनसँगै यहाँका युवाका लागि तरकारी खेतीबाट बहुआम्दानी गर्न सक्ने राम्रो सम्भावना छ । रासस
अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनमा अब यस्तो व्यवस्था हुने
शरीरमा यस्ता लक्षण देखिएमा यी पोषण तत्वको कमी भएको हुन सक्न
सरकारले बेच्ने खाद्यान्नमा यस्तो छ छुटको व्यवस्था
रसियन भ्याक्सिन ट्रिनिटी फर्मास्युटिकलले २ करोड ५० लाख डोज ल्याउने
श्रम स्वीकृति बन्द
बागमती प्रदेशले माग्यो २६ जना इन्जिनियर
‘याद राख्नुहोला, यी नामहरु इतिहासमा लेखाजोखा हुनेछ’
नेप्सेमा २० लाख कित्ता शेयर सूचिकृत
यी चिज पर्समा राख्दा कहिल्यै पैसाको अभाव हुँदैन
होटल साम्बालाको स्टेकेसन प्याकेज: दुई जना जाँदा विशेष छुट
चलचित्र उद्योगमा एक अर्बको लगानी होल्डमा, प्रोजक्टको बीमा अब बोर्डले गर्ने
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र ह्याम्स हस्पिटलबिच नगद रहित सेवा सम्झौता
डा.युवराज खतिवडा अमेरिकाको राजदूत, मुख्य सचिवमा वैरागी नियुक्त
एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गतका दुई योजनाको प्रतिफल सुरक्षित गर्ने बिहीवार अन्तिम दिन
सिटिजन्स भ्युचुअल फण्डका दुवै योजनाको इकाई मूल्य समायोजन
बैंक अफ काठमाण्डू प्रस्ताव गर्याे लाभांश, यो वर्ष बोनसमा जोड
कोरोना भाइरसको खोपमा रुसलाई अर्को सफलता
धितोपत्र व्यवसायीको कारोबारमा थप कडाइ, नयाँ म्यानुअल भोलिदेखि लागू हुने
नेपालको कोरोना संक्रमण दर भारतभन्दा दोब्बर
टीएमएस व्यवस्थापन ब्रोकरलाई दिने तयारी
इतिहासकै खराब टिभी बहसमा उत्रिए ट्रम्प र वाइडेन
पेप्सिकोलामा ग्यास बिस्फोट हुँदा ५ जना घाइते
भागबन्डा मिलेपछि तीन विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाए, कसको भागमा कुन?
उपत्यकामा थपिए ९०२ जना कोरोना संक्रमित
सहुलियत मूल्य पसल आजदेखि सञ्चालन, यस्तो छ छुटको व्यवस्था
मर्ज प्रक्रियाका वित्तीय संस्थाले उपत्यका बाहिर शाखा खोल्न स्वीकृति लिन नपर्ने
संखुवासभा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गयो